Akụkọ - N’ime ihe osise iri abụọ n’obodo ndị mepụtara ihe karịa,
Kedu ihe ọkpụkpụ 20 nke mepere emepe nke mepụtara karịa?
Obodo ọ bụla nwere nka ọhaneze nke ya, na ihe osise ndị mepere emepe na ụlọ ndị mmadụ jupụtara na ya, na ahịhịa na-adịghị na ya na ogige ntụrụndụ n'okporo ámá, na-enye obodo ndị mepere emepe ihe nchekwa na nguzozi na igwe mmadụ. Know maara nke ahụ ndia Ihe osise 20 nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ị chịkọta ha n'ọdịnihu.
Na ihe ọkpụkpụ nke “ Ike okike ”N'ime Ezubere isi obodo gburugburu ụwa nke onye omenkà Italy bụ Lorenzo Quinn dere. Quinn sitere n'ike mmụọ nsọ nke mbibi nke gburugburu ụwa mgbe oke ifufe ahụ gasịrị, ma mee ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara na aluminom ihe ọkpụkpụ n'ime “ Ike okike “ usoro . Nke a bụ "Ike okike" na London.
Onye omenka French bụ Bruno Catalano kere Les Voyageurs (Les Voyageurs) na Marseilles, France. Ihe ọkpụkpụ na-ezo akụkụ dị mkpa nke ahụ mmadụ, ọ na-adịkwa ka ọ dị ugbu a ọ gafere ọwara oge, akụkụ na-efu efu na-akpọtekwa ndị mmadụ Cheta na onye njem ọ bụla na-ahapụ nnukwu ụlọ maka iche n'echiche mgbe ọ hapụrụ ụlọ ya. Akụkụ ihe ọkpụ ahụ na-efu efu na-anọchi anya obi echefuru echefu nke ndị oge a?
Ihe akpụrụ akpụ nke Kafka nke onye ọkpụ ihe Czech bụ Jaroslav Róna mere sitere na ihe nkiri na akwụkwọ akụkọ mbụ Kafka bụ "America" ​​(1927). Na nzuko, onye ndoro ndoro ochichi na-agbasa n'ubu onye ibu. Na 2003, e mechara ihe osise ahụ na Dusny Street na Prague.
Imirikiti ọrụ Louise Bourgeois (1911-2010) na-eweta ekworo, iwe, egwu na nwatakịrị ya na-egbu mgbu n'ihu ọha site na ọrụ. "Maman" (Ududo) n'ihu Guggenheim Museum na Bilbao, Spain. Ududo a dị mita iri atọ na-anọchi anya nne ya. O kwenyere na nne ya maara ihe, nwee ndidi ma dịkwa ọcha dị ka ududo.
Cloudzọ Cloudgwé ojii ahụ nke onye omenkà Britain bụ Anish Kapoor mere bụ ihe osise oval 110-ton, nke a makwaara dị ka pọd, nke dị na Chicago Millennium Park. Site na mmiri Mercury sitere n'ike mmụọ nsọ, ihe ọkpụkpụ a bụ ụkwụ 66 n'ogologo na 33 elu. Ọ bụ ihe a ma ama na obodo mepere emepe na Chicago.
Na 2005, n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Danube na Budapest, onye nduzi ihe nkiri Can Togay na onye na-ese ihe bụ Gyula Pauer kere “Akpụkpọ ụkwụ ndị Danube” iji cheta mgbuchapụ nke ọtụtụ narị ndị Juu Hungary site na 1944 ruo 1945. Tupu mgbukpọ ahụ, ndị Juu na-etinye akpụkpọ ụkwụ ha n'akụkụ osimiri ahụ, mana mgbe mgbọ ahụ gasịrị, a kụrụ ozu ahụ kpọmkwem na Danube.
Ihe oyiyi nke Nelson Mandela bụ ndị a maara nke ọma. Onye kere South Africa bu Marco Cianfanelli mebere ihe osise a na nso nso Howick na South Africa.
Ihe oyiyi akwa ahụ nke onye ọkpụ Sweden bụ Klas Oldenburg mere dị n'akụkụ Halllọ Nzukọ Obodo Philadelphia.
"Digital Dougca" (Digital Dougca) mara mma ma ọ bụ dị egwu, ọ bụ ihe niile dị na Vancouver na-ele ọdụ ụgbọ mmiri na ugwu nke Cypress Park. Ihe omuma a bu ihe eji eme ka nchara, aluminom na-acha oji na oji na ocha, na-eme ka odi nma ndi njem nleta na ndi obodo.
A na-edozi ifuru balloon (uhie) na World Trade Center ọhụrụ na New York City.
Ọkpụkpọ ọla kọpa nke ịnyịnya ọhịa dị na Las Vegas, nke Robert Glenn kere, na-egosi mpụta nke ịnyịnya ọhịa itoolu na-agba na mmiri.
Ihe ọkpụkpụ a n'ihu National Library dị na Melbourne, Australia, pụtara ọdịda nke mmepeanya na n'otu oge ahụ na-egosi mkpụmkpụ nke eziokwu.
“Egbe a Kọnyere Aka” nọ n’akụkụ Isi quarterslọ Ọrụ Mba Ndị Dị n’Otu na New York. Ihe ọkpụkpụ a na-anọchite anya olileanya maka ụwa na-enweghị isi.
Echichi isi igwe a dị na Prague ma bụrụ otu n'ime ọrụ David Sini. Ihe dị iche n’etiti ihe ọkpụ a bụ na ọ nwere ike igbanwe nchara nchara nchara niile ogo 360 site na ntanetị, ma mgbe ị na-agbakwunye oge ụfọdụ, enwere ike ịmepụta nnukwu isi. Ọrụ a bụ njikọta nke onye na-ese ihe nke njikwa igwe na teknụzụ kọmputa na nka.
Echiche dị a doesaa ka ihe osise a dị ogologo ụkwụ iri abụọ na abụọ na Philadelphia gosipụtara onye na-ese ihe? Bibie ihe mgbochi niile, anyị ga-…
Ihe ọkpụkpụ a dị na mpụga Centre Pompidou Museum of Modern Art. N'ịbụ onye onye omenkà French bụ Cesar Baldaccini mere, ọ na-etinye otu n'ime isiokwu ya kachasị amasị ya, echiche efu nke mmadụ, anụmanụ na ụmụ ahụhụ.
N'ịbụ onye onye omenkà onye Hungary bụ Ervin Loránth Hervé mere, a buliri nnukwu ahịhịa ahụ, ọ ga-abụkwa nnukwu ihe osise na-arịgo n'elu ala. Ihe ọkpụkpụ a dị na mpụga Budapest Art Market.
Alberta’s Dream bụ ihe osise nke onye omenka Spain bụ Jaume Plensa sere. Ọrụ ahụ bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike, o yikwara ka ọtụtụ ndị nwere echiche dịgasị iche banyere ezi ihe ọ pụtara. Agbanyeghị, nke a bụ ihe na - eme nka Plensa pụrụ iche, n’ihi na ọ na - akpali nkwukọrịta nke na - adịbughị.
Ọrụ nke onye ọkpụ Singapore bụ Chong Fah Cheong (aha ndị China: Zhang Huachang). Ihe osise a na-egosi oge otu ụmụ nwoke banyere n'ime Osimiri Singapore. Otu ihe osise a dị na Cavenagh Bridge, na-adịghị anya na Fullerton Hotel.
"Ngaji na Cherị" nke dị na Minneapolis Sculpture Garden bụ ihe mara mma ma na-egwuri egwu n'ogige ahụ, ọ bụkwa n'ụzọ dị akọ na-egosipụtakwa na nsọtụ abụọ nke mkpịsị cherry ojii. Ọkpụkpụ ahụ nyere ya ọrụ ịgba mmiri iji mee ka cherị mara mma mgbe niile.
Post oge: Ọkt-16-2020